ISOFTWARE YANGAPHAKATHI YOYILO - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Isoftware yangaphakathi yoyilo
Ngale software yoyilo yasimahla unokwenza kwaye wenze ngokwezifiso iiprojekthi zakho zasekhaya. Ungasebenzisa umhleli okwi-intanethi ukongeza uyilo lwegumbi, uyilo lwangaphakathi, yongeza imibala, ifenitshala, ukukhanya, izinto ezahlukeneyo kunye nokunye. Unokudala uyilo lwakho kwi-2D okanye kwi-3D umbono kwaye xa ugqibile, bona indalo yakho kumbono wefotorealistic. Kumnandi ngokwenene kwaye kulula - khawuzame.
Kumhleli unokucwangcisa amagumbi, ukongeza izinto zokusebenza, ifanitshala, uburhabaxa, ubugcisa bodonga kunye nezinye izinto zokuhombisa. Umhleli unokusetyenziselwa ukuyila ngobukhulu obu-2 okanye ngokokubona okungu-3. Usebenzisa iindlela ezahlukeneyo unokusebenzisa ubude nokuphakama kwezinto ukuze ujongeke ngokugqibeleleyo. Ukuqala ungaqala iprojekthi entsha emva koko usebenze kwiprojekthi egciniweyo kwaye usebenzise itemplate ukuphucula uyilo lwakho.
Amagumbi kunye neendonga zinokongezwa kwaye unokutshintsha imilinganiselo ukuze ufumane imilinganiselo echanekileyo oyifunayo kulwakhiwo lwasekhaya. Iindonga zinokuhanjiswa, zahlulwe, kwaye zidityaniswe. Ikhathalogu inezinto ezingaphezulu kwama-3000 ezahlukeneyo onokongeza kulwakhiwo lwakho ngokurhuqa kwaye ulahle ujongano.
Imibala yazo naziphi na izinto okanye izinto ezifana nodonga, isilingi, kunye neplansi zinokutshintshwa ukuze zilungele isitayile sakho. Usebenzisa umbala wepeyinti onokuwutshintsha ngokulula unokutshintsha umbala wegumbi lakho ukuze ubone indlela imibala yokudibanisa eyahlukileyo etshintsha ngayo inkangeleko yoyilo lwakho. Unokongeza imibala eyahlukeneyo yomthi, iphepha lodonga, kunye nokukhethwa kwethayile kwiprojekthi yakho.
iinwele zomtshato isiqingatha siphakamise isiqingatha ezantsi ngesigqubuthelo
Isikhumbuzo seminyaka yokuqala yezimvo zomfazi
Utshintsha njani ngokusemthethweni igama lakho kwi-ma
Umama wengubo yomfazi womtshakazi
iimpahla zomtshato zikamyeni womyeni
izimvo umhla omhle isoka lakho